Al-shabaab oo goob fagaare ah ku toogtay Nin lagu helay fal xun – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Goob fagaare ah oo ku taalla deegaanka Ceel-cadde ee Gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa ay Al-shabaab ku toogteen nin la sheegay inuu Sixiroole ahaa.
Nin la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Sidiiq Xuseen, kaasi oo Maxkamadda Al-shabaab ay sheegtay inuu dadka deegaanka ku dhibaateyn jiray falka Sixirka ahaa, uuna dad badan ku kala geeyay.
Dadweyne farabadan oo degay ayaa la isugu geeyay goobta uu xukunka dilka toogashada aha aka dhacayay, kuwaasi oo Shabaab ugu tala-galeen inay Daawadan, sida uu u dhaceyso toogashada.
Maxkamadda Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Ceel-cadde ee Gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayuu Maxamed Sidiiq Xuseen kahor qirtay inuu muddo sannado ah ku shaqeysan jiray falka Sixirka ahaa.